Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba eziHlumayo zase-UK » I-COVID-19 furlough iphela ngexesha elibi kukhenketho lwase-UK
Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zikaRhulumente • Icandelo lokungenisa izihambi • Iihotele kunye neeholide • iindaba • abantu • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Safety • Tourism • uthutho • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba eziHlumayo zase-UK
Ukuphela kwe-COVID-19 furlough kuza kwelona xesha libi kukhenketho lwase-UK
Abahlalutyi beshishini baqikelela ukhenketho lwasekhaya lwase-UK ukubuyela kumanqanaba e-2019 nge-2022, xa iya kufikelela kuhambo lwe-123.9 yezigidi. Nangona kunjalo, uhambo oluphuma kumazwe aphesheya luya kuthatha ixesha elide kwaye aluyi kubuyela kumanqanaba angaphambi kwe-COVID kude kube ngu-2024, xa beza kubetha ii-84.7 ezigidi zeehambo.
Ukuphela kwe-furlough akunakufika ngexesha elibi kakhulu lonyaka kushishino lokuhamba e-UK.
Nangona ukubuyiswa kwasekhaya e-UK kusendleleni ye-2022 rebound, eli shishini kufuneka liqale ixesha elinzima lobusika kuqala.
Ukubetha ibhalansi kuya kubangela iintloko kwiinkampani ezininzi zokuhamba-ngakumbi ezo zixhomekeke kakhulu kukhenketho lwamanye amazwe.
Ngesikimu sase-UK esine-furlough set esiphele kule nyanga, iinkampani zokuhamba ziya kunyanzelwa ukuba zinciphise iindleko ukuze zisinde ebusika. Iingcali zeshishini lezoKhenketho noKhenketho zilumkisa ngelithi loo manyathelo anokubandakanya ukungabikho emsebenzini.
Ukuphela kwe-furlough ngekhe kufike kwi elona xesha libi kushishino lokuhamba e-UK. Ixesha elinzima lobusika liphezu kwethu, kwaye amanyathelo okwehlisa indleko aya kubaluleka ekusindeni. Ngelishwa, oku kuthetha ukuba ukungabikho kwemali kunokwenzeka, kuba le yeyona ndlela ilula yokugcina imali.
Abahlalutyi beshishini baqikelela UK uhambo lwasekhaya ukubuyela kumanqanaba e-2019 ngo-2022, xa iya kufikelela kwi-123.9 yezigidi zokuhamba. Nangona kunjalo, ngamazwe Uhambo oluphumayo luya kuthatha ixesha elide kwaye aluyi kubuyela kumanqanaba angaphambi kwe-COVID kude kube ngu-2024, xa beza kubetha ii-84.7 ezigidi zeehambo.
Nangona ukubuyela ekhaya kusendleleni yokubuyela kwi-2022, umzi mveliso kufuneka ujonge ixesha eliqhelekileyo lobusika kuqala. Ngaphandle kwesidingo esaneleyo, ingeniso iya kuqhubeka icinezelwa kwaye iinkampani ziya kusokola. Ibhalansi elungileyo kufuneka ibethwe phakathi kokuncitshiswa kunye nokukhawuleza kwexesha elizayo.
Iingcali zeshishini zikwabonisa ubungozi bokulahla iinombolo zabasebenzi kwiinkampani zokuhamba zase-UK, Ukuba iinkampani ziqala ukwenza abasebenzi bangafuneki, abanako ukuphendula ngokukhawuleza kwimfuno. Ukubetha ibhalansi kuya kubangela iintloko kwiinkampani ezininzi zokuhamba-ngakumbi ezo zixhomekeke kakhulu kukhenketho lwamanye amazwe. Ukutshintsha ngokukhawuleza kwendalo yezithintelo zokuhamba kunokubona ispike ngesiquphe kwimfuno yeendawo ezithile ngesaziso esifutshane. Ukuba inkampani inabasebenzi abambalwa, inokuphoswa yingeniso efuneka kakhulu. Kwelinye icala, ukugcina abasebenzi abaninzi kunokubangela iindleko eziphuma ngaphandle kolawulo.
Ukwandiswa kweskim se-furlough yeshishini lokuhamba kungathenga ixesha kwicandelo de ibango liqale ukomelela. Nangona kunjalo, ithemba lincinci.